भारत र न्युजील्यान्डबीच सेमीफाइनल आज : कसको सम्भावना बढी ?
काठमाडौं – क्रिकेट विश्वकपको पहिलो सेमीफाइनलमा मंगलवार भारत र न्युजील्यान्ड भिड्दैछन् । म्यानचेस्टरको ओल्ड ट्राफोर्डमा यो खेल हुनेछ ।
भारत चौथोपटक फाइनलमा पुग्न कोशिश गर्नेछ भने न्युजील्यान्ड लगातार दोस्रोपटक फाइनल पुग्न खोज्दैछ ।
भारतले न्युजील्यान्डविरुद्ध विगत चार वर्षमा ६९ प्रतिशत एकदिवसीय खेल जितेको छ । सन् २०१५ को विश्वकपपछि यी दुई टीमबीच १३ खेल भएका छन् । त्यसमा भारत ९ अनि न्युजील्यान्ड ४ खेलमा विजयी बनेको छ ।
म्यानचेस्टरमा दुवै टीम ४४ वर्षपछि भिड्दैछन् । पछिल्लोपटक उनी सन् १९७५ को विश्वकपमा भिड्दा न्युजील्यान्ड चार विकेटले विजयी भएको थियो । त्यसपछि इंग्ल्यान्डको भूमिमा भएका दुई खेलमा पनि न्युजील्यान्ड नै विजयी भएको थियो ।
भारतीय टीम छैठौंपटक विश्वकपको सेमीफाइनलमा पुगेको हो । त्यसमा ऊ तीनपटक विजयी र तीनपटक पराजित भएको छ । अघिल्लो विश्वकपमा उसलाई अस्ट्रेलियाले सेमीफाइनलमा हराएको थियो ।
न्युजील्यान्ड चाहिँ कीर्तिमान आठौंपटक सेमीफाइनल खेल्दैछ । तर सेमीफाइनलमा उसले जम्मा एकपटक जितेको छ भने ६ वटामा हारेको छ ।
यी दुई टोलीबीच कसल १०६ वानडे भएका छन् । तिनमा भारतले ५५ अनि न्युजील्यान्डले ४५ खेल जितेका छन् । एक गेम टाई भएको छ र पाँच खेलमा परिणाम आउन सकेन । यस विश्वकपमा यी दुई टोलीबीचको खेल वर्षाका कारण रद्द भयो ।
म्यानचेस्टरमा पानी पर्ने सम्भावना छ । दिनभरि बादल छाउनेछ । तापक्रम १८ देखि २० डिग्री सेल्सियस हुनेछ । पहिलो ब्याटिङ गर्ने टीमले फाइदा उठाउन सक्छ । चेज गर्ने टीमले पछिल्ला पाँच म्याचमा हार बेहोरेको छ ।
भारतका लागि ओपनिङ ब्याट्स्म्यान रोहित शर्मा शानदार फर्ममा छन् । उनले ८ इनिङ्समा ६४७ रन बनाएका छन् । यसक्रममा उनको औसत ९२.४२ र स्ट्राइक रेट ९८.७८ छ । उनले पाँच शतक हानिसकेका छन् ।
कप्तान विराट कोहली पनि राम्रो फर्ममा छन् । उनले आठ इनिङ्समा ४४२ रन बनाएका छन् । यस विश्वकपमा उनको पाँच अर्धशतक छ ।
बलिङको कुरा गर्दा जसप्रीत बुमराहले ८ खेलमा १७ विकेट लिएका छन् । अनि मोहम्मद शमीले ४ खेलमा १४ विकेट हार पारेका छन् । कुलदीप यादव भने खासै फर्ममा छैनन् ।
न्युजील्यान्डको कुरा गर्दा कप्तान केन विलियम्सनको प्रदर्शन उत्कृष्ट छ । उनले ९६.२० को औसतमा ४८१ रन बनाएका छन् । उनले दुई शतक प्रहार गरिसकेका छन् ।
बलरमा लोकी फर्गुसनले ७ खेलमा १७ विकेट लिएका छन् । उनले एक खेलमा चार विकेट लिएका छन् । १५० किलोमिटर प्रतिघन्टाको गतिमा बल फ्याँक्न सक्षम फर्गुसनले भारतीय ब्याट्स्म्यानहरूलाई अत्याउन खोज्नेछन् ।
न्युजील्यान्डका लागि मार्टिन गुप्टिल फर्ममा नहुनु चाहिँ चिन्ताको विषय हो ।
ओलम्पिकमा पदक जितेपछि किन त्यसलाई टोक्छन् खेलाडीहरू ?
ओलम्पिकमा जलपरी गौरिकाको राष्ट्रिय कीर्तिमान